Man City oo qarash-gareynaysa 200 oo milyan oo gini… (Haaland oo hoggaaminaya xiddigaha ay suuqa ka doonayso) – Gool FM
Muxuu Ronald Koeman ka yiri soo laabashadii cajiibka aheyd ee kooxdiisa Barcelona ku hor sameysay Sevilla?
Halyeey kooxda Juventus ah oo weerar culus ku qaday Cristiano Ronaldo
Ma ogtahay in Carles Puyol uu ka qayb qaatay guushii soo laabashada ahayd ee ay xalay Barcelona ka gaartay Sevilla?
Muxuu Tababare Solskjaer ku sheegay sababtii uu David de Gea kaga soo reebay safkii Manchester United ee xalay ka hor tagay Crystal Palace?
Kooxaha Chelsea, Liverpool, Inter Milan, Tottenham iyo guud ahaan kulammada caawa laga ciyaarayo qaar ka mid ah SHANTA horyaal ee ugu weyn qaaradda Yurub iyo tartammada maxallig ah
Horudhac: Liverpool vs Chelsea… (Liverpool oo qarka u saaran ineyn lumiso rikoor taariikhdeeda baal dahab ah kaga jiro)
Barcelona oo jaratay tikitka finalka Copa del Rey kaddib markii ay soo laabasho cajiib ah ku sameesay garoonka Camp Nou… + SAWIRRO
Kooxaha Crystal Palace iyo Manchester United oo barbardhac ku kala baxay… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Crystal Palace iyo Man United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Barcelona iyo Sevilla ee Copa del Rey oo la shaaciyey
Man City oo qarash-gareynaysa 200 oo milyan oo gini… (Haaland oo hoggaaminaya xiddigaha ay suuqa ka doonayso)
(Manchester) 17 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa in suuqa ku qarash-gareyn doonto 200 oo milyan oo gini, waxaana xiddigaha ay doonayso ka mid ah Haaland iyo Lukaku.
Xiddiga kooxda Benfica ee Nunez ayaa sidoo kale ka mid ah ciyaartoyda ay Man City suuqa ka bartilmaameedsanayso.
Tababare Pep Guardiola ayaa la siin doonaa gacan ku haynta maalgashiga kooxda Manchester City xagaagan.
Jariiradda The Telegraph ayaa warinaya in macallin Pep loo gacan gelin doono 200 milyan oo gini oo uu suuqa ku qarash-gareeyo isla markaana uu kula soo wareego xiddigo cusub suuqa kala iibsiga xiddigaha ee soo aaddan.
Man City ayaa durbaba la soo wareegtay daafacyo cusub dhowaan, waxaana ay raadinaysaa xagaaga inay xoojiso dhinacyada kale sida weerarka iyo khadka dhexe, iyadoo Erling Haaland iyo Romelu Lukaku ay ku jiraan liiska bartilmaameedyadooda.
Kooxda Manchester City waxay sidoo kale indhaha ku haysaa saxiixa xiddiga Naadiga Benfica ee Darwin Nunez.
"Man United waa kooxda ugu weyn adduunka, waana garaaceynaa Liverpool." - Maguire